Didim-pitondrana laharana faha 28968-MFPTLS / 11 amerana ny fomba fifidianana sy ny sata mifehy ny solotenan’ny mpiasa - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
NY MINISITRY NY ASAM-PANJAKANA SY NY ASA ARY NY LALANA SOSIALY,
Araka ny lalàna laharana faha-2003-044 tamin’ny 28 jolay 2004 anaovana fehezan-dalàna momba ny asa ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2005-329 tamin’ny 31 may 2005 manafoana ny didim-panjakana laharana -97-1149 tamin’ny 18 septambra 1997 sy ananganana Filan-kevi-pirenena momba ny Asa ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2010-723 tamin’ny 13 jolay 2010, amerana ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Asam-panjakana sy ny Asa ary ny Lalàna Sosialy sy ny fandaminana ankapobe ny Ministerany ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2011-136 tamin’ny 16 marsa 2011, manendry ny Praiminisitra sady Lehiben’ny Governemanta ;
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2011-140 tamin’ny 26 marsa 2011, manedry ireo mpikambana ao anatin’ny Governemanta ;
Rehefa avy nila hevitra tamin’ny Fivoriamben’ny Filan-kevi-pirenena momba ny Asa;
TOKO VOALOHANY : FEPETRA ANKAPOBENY
Andininy voalohany – Ny solotenan’ny mpiasa dia tsy maintsy fidiana ao amin’ny toeram-piasàna izay mampiasa mpiasa mihoatra ny iraika ambin’ny folo.
Arak’ity didim-pitondrana ity, atao hoe toeram-piasàna ny toerana ahitana vondron’olona miasa eo ambany fahefan’olona iray na maro misolotena ny fahefam-pitantanana iray, olon-tsotra na fikambanana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.
Ny toeram-piasàna dia faritana amin’ny alalan’ny fanaovana asa itambarana amin’ny toerana iray voatondro, ny teny hoe toerana dia ampiasaina amin’ ny maha trano fiasana, toerana na fitoerana anaovana asa na toerana amoriana ny mpiasa fa tsy amin’ny maha tanàna na faritra.
Atao hoe orinasa ny fikambanana iray manana endrika ara-dalàna (fananana manokana na iombonana), mijoro mba hamokarana zavatra amidy na asa sandaina vola.
Ny orinasa iray dia mety manana toeram-piasàna iray na maro.
Andininy faha – 2 : Ny isan’ny solotenan’ny mpiasa hofidiana dia faritana toy izao:
Mpiasa roa amby folo ka hatramin’ny mpiasa telopolo : solotenan’ny mpiasa tompo-toerana iray sy mpisolo-toerana iray ;
Mpiasa iraika amby telopolo ka hatramin’ny mpiasa sivy amby efapolo: solotenan’ny mpiasa tompo-toerana roa sy mpisolo-toerana roa ;
Mpiasa dimampolo ka hatramin’ny mpiasa zato: solotenan’ny mpiasa tompo-toerana telo sy mpisolo-toerana telo ;
Mpiasa iraka amby zato ka hatramin’ny mpiasa efajato: solotenan’ny mpiasa tompo-toerana efatra sy mpisolo-toerana efatra ;
Mpiasa iraka amby efajato ka hatramin’ny mpiasa sivinjato: solotenan’ny mpiasa tompo-toerana dimy sy mpisolo-toerana dimy ;
Mpiasa iraka amby sivinjato ka hatramin’ny mpiasa roa arivo: solotenan’ny mpiasa tompo-toerana enina sy mpisolo-toerana enina ;
Mpiasa iraka amby roa arivo ka hatramin’ny mpiasa dimanjato sy telo arivo : solotenan’ny mpiasa tompo-toerana fito sy mpisolo-toerana fito ;
Mpiasa iraka amby dimanjato sy telo arivo ka hatramin’ny mpiasa dimanjato sy dimy arivo : solotenan’ny mpiasa tompo-toerana valo sy mpisolo-toerana valo ;
Mpiasa iraka amby dimanjato sy dimy arivo ka hatramin’ny mpiasa valo arivo : solotenan’ny mpiasa tompo-toerana sivy sy mpisolo-toerana sivy ;
Manomboka amin’ny mpiasa valo arivo : solotenan’ny mpiasa tompo-toerana folo sy mpisolo-toerana folo.
Andininy faha – 3 : Ny isa raisina dia ny isan’ny mpiasa miasa isan’andro ao amin’ny toeram-piasàna ka tafiditra ao amin’izany :
ny mpianatra asa ;
ny mpiasa manao andran’asa ;
ny mpiasa karamaina isan’ora na isan’andro ka mitotaly enim-bolana farafahakeliny ny fotoana niasany tao anatin’ny taona.
TOKO II : MOMBA NY FIFIDIANANA SOLOTENAN’NY MPIASA
Andininy faha – 4 : Ny solotenan’ny mpiasa hofidiana eo anivon’ny toeram-piasàna tsirairay avy dia atolotry ny fikambanan’ny mpiasa.
Ny fikambanan’ny mpiasa mahafeno ireto fepetra voalaza manaraka ireto no afaka manolotra lisitra:
nandefa tany amin’ny mpampiasa ny fanambaram-pisiana eo amin’ny toeram-piasàna araka ny lalàna manakery ;
manana fahafahana honolotra ny isan’ny mpilatsaka ho fidiana takiana izay mitovy isa amin’ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana y mpisolo-toerana hofidiana ;
mampita amin’ny mpampiasa ny lisitry ny mpilatsaka ho fidiana avy aminy, farafahatarany ny andro fiasàna farany alohan’ny vaninandro izay tsy maintsy anaovan’ny mpampiasa petadrindrina, araka ny fepetra voalazan’ny andalana faha 4 ny andininy faha 10 amin’ity didim-pitondrana ity.
Andininy faha-5: Zaraina ho kolejy roa ny mpiasa :
Ny kolejy voalohany dia misy ny mpianatra asa, ny mpanao asa tanana sy ny mpiasa birao
Ny kolejy faharoa dia ahitana ny mpiasa manana ny mari-pahaizana « maîtrise », ny enjeniera, ny tompon’andraikitra ambony sy ny lehiben’ny sampan-draharaha na foibe.
Zaraina roa ny kolejy voalohany, raha mihoatra dimanjato ny isan’ny mpiasa, mba hahafahana manana fisoloatena samihafa ho an’ny mpiasa manao asa tanana sy ny mpiasa birao.
Ny fitsinjarana ny mpiasa amin’ireo kolejy ireo sy ny famaritana ny isan’ny solotenan’ny mpiasa amin’ny kolejy tsirairay avy, araka ny isan’ny solotenan’ny mpiasa hofidiana eo amin’ny toera-mpiasàna, dia ifanarahana mialoha eo amin’ny lehiben’ ny toeram-piasàna sy ny fikambanan’ny mpiasa voakasika.
Raha ohatra ka tsy tanteraka ny fifanarahana, ny Inspecteur du Travail na ny mpisolotena azy no manapaka.
Andininy faha-6: Ny mpiasa, lahy na vavy, mihoatra ny valo amby folo taona, niasa enim-bolana farafahakeliny tao amin’ny toeram-piasàna na orinasa foiben’ny toeram-piasàna ka tsy mbola nisazy noho ny heloka bevava na fandikan-dalàna izay saziana amin’ny sazy manaisotra ny fahalalahana mihantona na mihatra no mpifidy.
Andininy faha-7: Ny mpiasa, teratany malagasy, mahafeno ny fepetra takiana amin’ny mpifidy ka niasa tao amin’ny toeram-piasàna na orinasa mandritra ny roa amby folo volana farafahakeliny, no azo fidiana ao anatin’ny kolejy.
Azo fidiana ny mpiasa teratany vahiny raha ohatra ka manana porofo fa, ankoatry ny fepetra takiana amin’ny teratany malagasy, nonina teto Madagasikara farafahakeliny roa taona ka ao anatin’izany izay mety tsy maha eto an-toerana azy noho ny fialan-tsasatra ara-dalàna.
Tsy azo fidiana ny Rayaman-dReny sy ny havam-badin’ny lehiben’ny toeram-piasàna na ny lehiben’ny orinasa hatramin’ny ambaratonga fahatelo.
Andininy faha-8: Ny Inspecteur du Travail dia afaka mampihena ny fepetra momba ny fahelana tao amin’ny toeram-piasàna na orinasa voalaza ao amin’ny andininy faha 6 sy faha 7 amin’ity didim-pitondrana ity, raha ohatra ka ny fampiharaha azy ireo mety hiteraka fihenana latsaky ny iray ampaha telon’ny totalin’ny mpiasa ny isan’ny mpiasa mahafeno ny fepetra amin’ny kolejy tsirairay avy.
Tsy takiana ny fepetra momba ny fahelana amin’ny toeram-piasàna vao mitsangana.
Andininy faha – 9 : Atao isaky ny roa taona mandritra ny enim-bolana voalohany ny fifidianana solotenan’ny mpiasa manerana ny faritra rehatra.
Na izany aza, ny fe-potoana iasan’ny solotenan’ny mpiasa tsy hisahana intsony ny asany dia tsy azo halavaina mihoatra ny roa volana.
Andininy faha -10 : Atao ao anatin’ny toeram-piasàna mandritra ny ora fiasàna ny latsabato.
Ifanarahan’ny lehiben’ny toeram-piasàna na ny solotenany sy ireo fikambanana sendikaly mahafeno ny fepetra takian’ny andininy faha 4 amin’ity didim-pitondrana ity ny famerana ny andro, ny toerana ny ora fisokafana sy fikatonan’ny latsabato.
Ireo torolalana ireo dia ambara amin’ny alalan’ny petadrindrina ataon’ny lehiben’ny toeram-piasàna na ny solotenany amin’ny toerana voatokana hanaovana fanambarana ho an’ny mpiasa, dimy amby folo andro mialoha farafahakeliny alohan’ny vaninandro anaovana ny latsabato.
Ny lisitry ny mpilatsaka hofidiana avy amin’ny fikambanan’ny sendika mahafeno ny fepetra voalazan’ny andininy faha 4 amin’ity didim-pitondrana ity dia ataon’ny heliben’ny toera-mpiasàna na ny solotenany petadrindrina amin’ny toerana nanaovana ny fanambarana momba ny latsabato, folo andro farafahakeliny alohan’ny vaninandro anaovana ny latsabato. Ny lisitra dia tsy maintsy mampahafantatra ny anarana, fanampin’anarana, taona sy ny fotoana niasan’ny mpilatsaka hofidiana ary ny sendika manolotra azy.
Ny Mpiasa tsy afaka mandray anjara amin’ny latsabato noho ny andraikitra ivelan’ny toeram’piasàna, ireo izay miala sasatra na mihantona ny fifanarahana arak’asa dia afaka mandatsabato amin’ny alalan’ny fanomezana fahefana ny mpiasa iray ao amin’ny toeram-piasàna na an-taratasy.
Andininy faha-11: Hamarinin’ny Inspecteur du Travail na ny mpisolo-toerana azy izay manome alalana ny hanatanterahana fifidianana ireo mpilatsaka tsy natolotry ny fikambanan’ny mpiasa ny fahabangana raha tsy misy fikambanan’ny mpiasa mahafeno ireo fepetra voalazan’ny andininy faha 4 amin’n’ity didim-pitondrana ity eo anivon’ny toeram-piasàna na ny kolejy.
Andininy faha-12 : Ny fifidianana solotenan’ny mpiasa dia atao amin’ny latsabato miafina sy amin’ny valopy. Atao indray mandeha monja isaky ny kolejy ny fifidianana ireo mpilatsaka hofidiana voasoratra ao amin’ny lisi-pifidianana ikambanana ho an’ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana sy mpisolo-toerana.
Andininy faha-13 : Ho an’ireo toeram-piasàna mampiasa mpiasa roa amby folo ka hatramin’ny sivy amby efapolo, latsabato indray mandeha amin’ny lisitra no atao.
Ny lisitra mahazo vato ambony indrindra no lany raha ohatra ka farafahakeliny mitovy amin’ny iray ampahatelon’ny isan’ny mpifidy voasoratra anarana ny isan’ny vato azo.
Tanterahina aorian’ny fahataperan’ny fe-potoana roa volana ny fifidianana vaovao raha tsy misy lisitra mahazo ny isan’ny vato voalaza etsy ambony na raha mitovy ny isan’ny vato azon’ny lisitra roa.
Andininy faha-14 : Ho an’ireo toeram-piasàna mampiasa mpiasa mihoatra ny dimampolo, latsabato indroa amin’ny lisitra no atao ka ny fisoloatena dia arakaraky ny vato azo.
Raha amin’ny fihodinana voalohany, kely noho ny isan’ny mpifidy voasoratra anarana ny isan’ny vato manankery, tanterahina ao anatin’ny fe-potoana iray volana ny fihodinana faharoa, ka afaka mandatsabato ho an’ny lisitra hafa ankoatry ny lisitra natolotra tamin’ny fihodinana voalohany ny mpifidy, ny fanaovana ny lisitra vaovao amin’izay dia apetraka malalaka amin’ny mpikambana ao amin’ny kolejy. Ny lisitra dia ampitaina amin’ny mpampiasa ary anaovana fanambarana, araka ny voalazan’ny andininy faha 4 sy ny andininy faha 10 etsy ambony.
Ny isan’ny toerana omena ny lisitra dia arakaraky ny isan’ny vato azon’ny lisitra tsirairay avy.
Ny marika amerana ny anjara toerana na « quotient electoral » dia azo avy amin’ny fizarana ny vato manakery amin’ny isan’ny toerana ilaina.
Ny fizarana ny toerana sisa noho ny tsy fahatsatrarana ny marika amerana ny anjara toerana dia atao araka ny halehiben’ny isa sisa latsaky ny marika amerana ny anjara toerana.
Andininy faha-15: Ny lehiben’ny toeram-piasàna no miandraikitra ny fandaminana ny fifidianana solotean’n’ny mpiasa, ka isan’izany ny fananganana ny biraom-pifidianana, ny fanomezana ny vato alatsaka hofidiana ny valopy, ny fanamboarana vata fandatsaham-bato, ny efitra fandatsaham-bato sy ny fanaovana ny fitanana an-tsoratra.
Ny lehiben’ny toeram-piasàna na ny solotenany no filohan’ny biraom-pifidianana ka ampian’ny solotena iray, tsy isan’ny mpilatsaka hofidiana, tendrena isaky ny lisitra izy amin’izany. Ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana dia manatrika mandritra ny fanatanterahana ny latsabato sy ny fanisana ny vato. Ambara sy ataon’ny filohan’ny biraom-pifidianana izay manao ny fitanana an-tsoratra soniaviny sy ny mpanampy azy petadrindrina avy hatrany ny voka-pifidianana.
Ny fitanana an-tsoratra roa sosona dia alefan’ny lehiben’ny toeram-piasàna avy hatrany any amin’ny Inspecteur du Travail izay mampita sosona iray any amin’ny lehiben’ny farim-piadidiana.
Andininy faha-16: Ankoatry ny tranga voalazan’ny andininy faha 5 amin’ity didim-pitondrana ity, ny filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany, mitsara araka fomba fanao amin’ny ady noho ny fahamehana, no mitsara ny fifanolanana momba ny fifidianana solotenan’ny mpiasa sy teraka mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana.
Ny fitsarana momba ny asa no mitsara ny fangatahana fanafoanana ny fifidianana solotenan’ny mpiasa sy ny fifanolanana momba ny fifidianana ka teraka taorian’ny fanatanterahana ny fifidianana.
TOKO III: FANAOVANA NY ASAN’NY SOLOTENAN’NY MPIASA
Andininy faha-17: Ny lehiben’ny toeram-piasàna dia tsy maintsy mamela ny solotenan’ny mpiasa tsirairay avy, tompo-toerana na mpisolo-toerana izay misolo ny tompo-toerana araka ny tranga voalaza ao amin’ny andininy faha 21 amin’ity didim-pitondrana ity, fotoana ilaina amin’ny fanatanterahana ny asany, fotoana izay ferana ho dimy amby folo ora isam’bolana, afatsy ny fisian’ny antony manokana.
Io fotoana io dia andraisan-karama mitovy amin’ny fotoam-piasàna ka karamaina amin’ny karama araka ny tokony ho izy, na dia notanterahina ivelan’ny fotoam-piasàna ara-dalàna na heverina ho mifandraika amin’ny fotoam-piasàna fohy kokoa tena niasana, araka ny fifanarahana teo amin’ny roa tonta. Tsy maintsy ampiasaina amin’ny asa mifanaraka amin’ny andraikitra ankinina amin’ny solotenan’ny mpiasa araka ny famaritan’ny fehezan-dalàna momba ny asa io fotoana io.
Noho ny antony manokana voaporofon’ny fidadasiky ny toeram-piasàna sy ny fiparitahan’ny mpiasa dia azo atao ny mampitombo ny fotoana dimy amby folo ora isam-bolana voalazan’ny andalana teo aloha, amin’ny alalan’ny fanapahan-kevitra raisin’ny lehiben’ny faritany, araka ny tolo-kevitra naroson’ny Inspecteur du Travail.
Ny solotenan’ny mpiasa, ankoatry ny antota-taratasy hafa, aorian’ny fankatoavan’ny lehiben’ny toera-mpiasàna dia afaka mampanao petadrindrina ny filazana tiany hampahafantarina ny mpiasa eo amin’ny toerana voatokana hanaovana fanambarana avy amin’ny sendika na eo amin’ny toerana natokan’ny mpampiasa hanaovan’ny solotenan’ny mpiasa fanambarana sy eo amin’ny toerana anaovana petadrindrina momba ny fitadiavana mpiasa, ankoatry ny toeram-piasana vonjimaika. Raha misy fandavana avy amin’ny mpampiasa dia ny Inspecteur du Travail no itondrana ny raharaha sy manapaka.
Andininy faha-18: Raisin’ny mpampiasa na ny solotenany miaraka, farafahakeliny indray mandeha isaky ny iray volana, ny solotenan’ny mpiasa. Ankoatr’izay, raisin’ny mpampiasa miaraka na isaky ny kolejy ny solotenan’ny mpiasa noho ny fangatahany na noho ny finiavan’ny mpampiasa manokana raha misy fahamehana.
Amin’ny lafiny rehetra, ny solotenan’ny mpiasa mpisolo-toerana dia afaka manatrika ny fivoriana iarahana amin’ny mpampiasa miaraka amin’ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana. Ny fotoana lanin’ny solotenan’ny mpiasa mpisolo-toerana amin’io fivoriana io dia raisina ho fotoam-piasàna andraisan-karama mitovy amin’ny fotoana omena ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana izay anaovany ny asany.
Entina manokana eo amin’ny taleny, amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha, ary dia manana fe-potoana roa volana izy, manomboka amin’ny vaninandro andraisana ny fanontaniana, hanomezany ny valiny avy amin’ny orinasa, ny amin’ny fanontaniana napetraka, nalefan’ny olona manankina ny raharahany aminy, izay manana endrika dika mitovy amin’ny fanapahan-kevitra ka nohamarinina, raha ohatra ka mila ny fanapahan-kevitry ny filan-kevim-pitantanana na ny tale jeneraly ivelan’ny toerana misy ny toeram-piasàna, ny fanontaniana napetraky ny solotenan’ny mpiasa amin’ny lehiben’ny toeram-piasàna.
Andininy faha-19: Raha tsy misy antony manokana, ny solotenan’ny mpiasa dia manome amin’ny lehiben’ny toeram-piasàna na ny solotenany, roa andro mialoha ny vaninandro andraisana azy ny naoty an-tsoratra milaza amin’ny ambagovangony ny anton’ny fangatahana nataony. Ny lehiben’ny toeram-piasàna no mandika amin’ny firaiketana an-tsoratra manokana, izay tsy maintsy ilazana ihany koa ny valiny mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny fito andro, ny dika mitovy amin’ny naoty.
Mandritra ny ora fiasàna, io firaiketana io dia tsy maintsy omena ny mpiasa izay manana hetaheta hahalala, indray mandeha isaky ny dimy amby folo andro
Amin’ny fotoana rehetra, io firaiketana io dia tsy maintsy omena ihany koa ny Inspecteur du Travail na ny solotenany.
Atao avy hatrany ny fitanana an-tsoratra ny fivoriana izay soniavin’ny mpampiasa na ny solotenany sy ny solotenan’ny mpiasa tonga nanatrika ny fivoriana, avy eo dia ataon’ny mpampiasa petadrindrina amin’ny toerana voatokana hanaovana fanambarana ho an’ny mpiasa.
Andininy faha-20: Ny antony manokana tsy ilana ny filazana roa andro mialoha andraisana ny solotenan’ny mpiasa dia tsy maintsy faritana ho toy izao :
Na antony manokana mikasika ny fitakiana, toy ny fahamehan’ny fangatahana (fametrahana ny fitaovana fiarovana amin’ny loza aorian’ny fitrangan’ny loza vokatry ny asa ohatra) ;
Na ny antony manokana mifandraika amin’ny filaminan’ny orinasa, toy ny fitataon’ny korontana mahery vaika ao amin’ny toeram-piasàna na ny tsy maintsy amerenana ny fifanarahana eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa.
Amin’ny lafiny rehetra, ny fangatahana fihaonana dia tsy maintsy mifanaraka amin’ny fanajana ny fahefan’ny lehiben’ny toeram-piasàna.
Andininy faha-21: Tanterahin’ny solotenan’ny mpiasa mpisolo-toerana ao amin ‘ny kolejy misy azy izay lasa tompo-toerana mandram-piverin’ny solotena soloana na mandra-pahatonga ny fanavaozana ny fotoam-piasàn’ny solotenan’ny mpiasa ao amin’ny toeram-piasàna ny fanoloana ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana raha toa ka tsy afaka manao ny asany intsony na amin’ny fotoana voafetra izy.
Azo atao ny manatanteraka fifidianana fanampiny ifanarahan’ny roa tonta mba hanendrena mpisolo-toerana vaoavao raha toa ka misy fanoloana maharitra.
Na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha 156 ny fehezan-dalàna momba ny asa izay ampiharina amin’ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana sy mpisolo-toerana sy ny fepetra voalazan’ny andininy faha 17 andalana faha 2 amin’ity didim-pitondrana ity, ny solotena’ny mpiasa mpisolo-toerana dia tsy mahazo ireo zo sy tombotsoa azon’ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana ary tsy voatery hanatanteraka ireo andraikiny raha tsy misolotena azy tanteraka.
Andininy faha-22: Ny fametrahana solotenan’ny mpiasa dia tsy misakana ny fahafahan’ny mpiasa hanolotra soso-kevitra sy hitaky ny zony amin’ny mpampiasa na amin’ny solotenany ary koa hitondra ny raharaha eo amin’ny Inspecteur du travail.
Andininy faha-23: Atao amin’ny alalan’ny fangatahana an-tsoratra soniavin’ny antsasa-manila ny kolejy misy ny mpiasa ary hamafisina amin’ny latsabato miafina ataon’ny roa ampaha-telon’ny mpikambana ao amin’ny kolejy ny fanonganana ny solotenan’ny mpiasa amin’ny toerany araka ny voalazan’ny andininy faha 157 ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Ny solotenan’ny mpiasa tompo-toerana iray naongana dia soloin’ny solotenan’ny mpiasa mpisolo-toerana. Azo atao ny manatanteraka fifidianana fanampiny ifanarahan’ny roa tonta mba hanendrena mpisolo-toerana vaoavao.
TOKO IV: FEPETRA FARANY
Andininy faha-24: Ity didim-pitondrana ity dia manafoana sy manolo ny didim-pitondrana laharana faha 421 tamin’ny 26 janoary 1968
Andininy faha-25: Na izany aza, mba ho fampiharana voalohany ny andininy faha sivy amin’ity didim-pitondrana ity, ireo toeram-piasàna izay misy solotenan’ny mpiasa voafidy araka ny didim-pitondrana laharana faha 421 tamin’ny 26 janoary 1968 voalaza etsy ambony dia omena alalana manokana hanafaingana na hamemotra ny vaninandro anaovana ny fifidianana ho amin’ny vaninandro akaiky indrindra, tafiditra ao anatin’ny fotoam-pifidianana.
Andininy faha-26: Hosaziana amin’ireo sazy voalaza ao amin’ny andininy faha 258 amin’ny fehezan-dalàna momba ny asa ny fandikana ny fepetra voalazan’ity didim-pitondrana ity ka manembatsembanana ny fifidianana sy ny fanatanterahana ny asan’ny solotenan’ny mpiasa.
Natao teto Antananarivo, faha- 6 oktobra 2011
NY MINISITRY NY ASAM-PANJAKANA, NY ASA ARY NY LALANA SOSIALY